Fizahan-tany afrikanina: Fanambarana an'i Kinshasa mandrisika ny fizahan-tany ho mpamily fiarovana ny harena voajanahary sy fiarovana ny tontolo iainana
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Fizahan-tany afrikanina: Fanambarana an'i Kinshasa mandrisika ny fizahan-tany ho mpamily fiarovana ny harena voajanahary sy fiarovana ny tontolo iainana
Aprily 11, 2018
Herinandro mahery nifanakalozana traikefa sy fananganana fahaiza-manao mifandraika amin'ny fiarovana ny bibidia sy ny zava-boahary no nitranga tao Kinshasa, Repoblika Demokratikan'i Kongo. Vokatry ny fandraisana andraikitra isam-paritra izay eo ambanin'ny drafitry ny UNWTO / Chimelong Initiative on Wildlife Conservation and Sustainable Tourism dia ny Declaration of The Regional Conference no namintina ny atrikasa fampiofanana natao nandritra ny taona 2017 izay nandrisika ny vondrom-piarahamonina sy ny mpizahatany mpizahatany mba miasa ho tompon-daka amin'ny fiarovana ny zava-boary sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Vokatr'izany, olona maherin'ny 120 no nozarina tamin'ny taona lasa avy any Niger, Gabon, Benin, Guinea ary ny Repoblika Demokratikan'i Kongo momba ny famolavolana sy fampiharana ireo hetsika eo an-toerana momba ny fizahan-tany sy ny bibidia any amin'ny fireneny avy, izay nasehon'izy ireo nandritra ny fihaonambe.
Ny fanokafana ny kaonferansa izay nankasitraka mpandray anjara maherin'ny 100 avy amin'ny firenena dimy ankoatra an'i Zimbabwe, ny minisitry ny fizahan-tany ao amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo, Franck Mwe di Malila Apenela dia nanamafy ny "lanjan'asa lehibe eo amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny fampandrosoana ny fizahantany sy ny fiarovana ny harena voajanahary. ”Ary ny hoe“ tsy kisendrasendra ny hanatontosan'ny Agenda UNWTO ho an'i Afrika ho toy ny iray amin'ireo laharam-pahamehany ”. Andriamatoa Shanzhong Zhu, Tale Mpanatanteraka UNWTO, dia nilaza fa "ny valiny natolotra nandritra ny fihaonambe dia hanome fotoana tombony ahazoana tombony ara-toekarena sady hampirisika ny fiarovana sy fitantanana sahaza ny biodiversité mifanaraka amin'ny fampandrosoana maharitra ny fizahantany".
Ny lanonam-panokafana dia narahin'ny lahateny fanalahidy lehibe nataon'i Seamus Kearney, mpanao gazety sady mpamokatra, izay nanasongadina ny mety hampiditra ny haino aman-jery amin'ny fandraisana andraikitra maharitra miorina amin'ny fizahan-tany sy ny filana mifampiresaka amin'ny fahamarinana sy mangarahara.
Tamin'izany fotoana izany Andriamatoa Shanzhong Zhu, Tale Mpanatanteraka UNWTO dia nihaona tamin'ny praiminisitra DRC HE Bruno Tshibala, mba hiady hevitra momba ny fifandraisana misy eo amin'ny fanamorana ara-toekarena, ny fampandrosoana ny fizahantany ary ny fiarovana ny harena voajanahary. Nankasitraka Andriamatoa Zhu ny vinan'ny governemanta DRC hametraka ny fizahan-tany ho laharam-pahamehana amin'ny famoronana asa.
Adihevitra momba ny minisiteran'ny fizahantany an'ny DRC, Franck Mwe di Malilia Apenela, sy i Niger, Ahmet Botto, miaraka amin'ny sekretera maharitra ao amin'ny minisiteran'ny fizahantany sy ny indostrian'ny hospitalty ao Zimbabwe, Dr. Thokozile Chitepo ary ny talen'ny Executive UNWTO, Shanzhong Zhu dia nanamafy ny maha-zava-dehibe ny fifandraisana eo amin'ny andrim-panjakana sy ny mety hisian'ny manampahefana misahana ny fizahan-tany amin'ny fepetra fiarovana ny bibidia.
Ny fampandraisana anjara ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana, ny fampiroboroboana ireo programa fanabeazana momba ny fizahan-tany maharitra sy ny fampitomboana ny fahatsiarovan-tena amin'ny biodiversité sy ny fiainana dia ny sasantsasany amin'ireo lohahevitra noresahina tamin'ny adihevitra.
"Ny zava-bitan'ny Taona Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany maharitra ho an'ny fampandrosoana izay nankalazantsika tamin'ny 2017, ny Fanambarana Lusaka momba ny fizahan-tany maharitra sy ny fiaraha-mientana amin'ny fiaraha-monina any Afrika ary ny satan'i Afrika voalohany momba ny fizahan-tany maharitra sy tompon'andraikitra noraisin'ny COP22 dia mamorona rafitra tsara indrindra hampandroso ny sehatry ny fizahan-tany mankany amin'ny fampiharana maharitra kokoa "hoy Andriamatoa Zhu.
Araka ny voalaza tao amin'ny Fanambarana, ireo firenena manana sonia dia manolo-tena “hanamafy ny anjara asan'ny Fizahan-tany maharitra ho fampivoarana ho an'ny fampandrosoana sy fanohanana ny fiarovana ny tontolo iainana” ary “hiditra amin'ny fanamafisana ny fiarovana ny harena voajanahary, hampahafantatra ny miady amin'ny endrika isan-karazany amin'ny fitrandrahana tafahoatra ny loharanon-karena ao anatin'izany ny fanjonoana olona ary mampihena ny dian-tongotry ny karbaona amin'ireo hetsika mifandray amin'ny fizahan-tany ”
Fifandraisana stratejika izay fototry ny fiarovana ny bibidia
Ankoatry ny Fihaonambem-paritra dia nandray anjara tamin'ny atrikasa fanofanana momba ny fifandraisana sy ny fifandraisana amin'ny haino aman-jery ireo solontena ao anatin'ny drafitry ny UNWTO / Chimelong Program. Eo ambanin'ny lohahevitra fampitana ny rohy misy eo amin'ny bibidia sy ny fizahan-tany maharitra, ny delegasiona dia nanadihady ny mety ho an'ny bibidia amin'ny fampiroboroboana ny tanjon'izy ireo ary ny fomba sy ny fomba fanao amin'ny fifandraisana stratejika izay nanamora ny asan'izy ireo.
Ny atrikasa dia nahitana fanitsiana feno ny fomba teôria sy ny fomba fampiharana ny fifandraisana stratejika ary koa ny fomba samihafa amin'ny fifandraisana amin'ny haino aman-jery. Ny famoronana vokatra manavao mba hisarihana ny fahalianan'ny mpanao gazety, ny fananganana fifandraisana misy ifandraisany amin'ny vondrom-piarahamonim-pirenena sy ny fanamafisana ny foibe ho mpiaro ny fiarovana ny bibidia sy ny fizahan-tany maharitra dia ao anatin'ny fiofanana. Tamin'ny alàlan'ny vondrona miasa dia nisy ny mpandray anjara nanangana paikady fifandraisan-davitra ho an'ny vokatra fizahan-tany toy ny zaridainan'i Zongo sy Malebo ao RDC.
Na ny atrikasa momba ny fifandraisana amin'ny fifandraisana sy ny haino aman-jery ary koa ny Fihaonambem-paritra dia natao tao anatin'ny rafitry ny UNWTO / Chimelong Initiative on Wildlife Conservation and Sustainable Tourism. Ity fandraisana andraikitra ity, izay ampiharina eo anelanelan'ny 2017 sy 2019, dia miresaka ny mety hisian'ny fizahan-tany maharitra ho mpamily fiarovana sy fiarovana ny bibidia any Afrika sy Azia. Ny Programm dia mampifangaro ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'ny fitantanana fizahantany, ny fidirana amin'ny haino aman-jery amin'ireo lohahevitra ireo ao anatin'izany ny loka Media sy ny fampandrosoana talenta amin'ny alàlan'ny programa fiaraha-miasa, ankoatry ny hetsika hafa.
World Tea Coffee Expo 2018 hatao amin'ny toerana vaovao miparitaka amin'ny gorodona 2 ao Mumbai
Mikaroka lafiny iray hafa any Bruxelles: Ny Iris Festival any amin'ireo kaomina